Abiy Ahmed oo war ka soo saaray weerar lagu qaaday masaajido ku yaalla dalkaas – Hornafrik Media Network
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa cambaareeyey rabshadaha diineed ee dalkaas kadib markii weerarro lagu qaaday dhowr masaajid oo ku yaalla gobolka Amxaarada.
Warbaahinta dowladda ku xiran ee Fana ayaa sabtidii werisay in dhowr masjid la weeraray, sidoo kalena hanti lagu burburiyey magaalada Mota, oo 350km waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
“Isku dayada ay xagjiriinta ku donayaan inay ku buburiyaan taariikhdeenna hodonka ee isku dul-qaadka diimeed iyo wadajir, wax kaalin ah kuma lahan Itoobiyada cusub,” ayuu Abiy Ahmed ku yiri bayaan lagu soo qoray barihiisa facebook iyo twitter.
“Waan caamberynayaa ficillada fuleynimada ah, waxaana ugu baaqay dhammaan dadka Itoobiya ee nabadda jecel inay adeegsadaan garashadeenna qotada dheer ee wada jirka iyo is-xushmeynta.”
Warbaahinta Fana waxay werisay in ilaa seddax Masaajid la weeraray. Ma cadda xilliga ay dhaceen rabashadahan, waxa sababay, cidda ka dambeysay, iyo haddii ay jiraan dad ku dhaawacmay ama ku dhintay.
Saraakiisha gobolka Amxaarada Itoobiya weli kama aysan hadlin dhacdooyinkan. Inkasta oo rabshadaha qowmiyadaha ku saleysan ay jireen tan iyo markii uu xukunka yimid Abiy Axmed, waxayna kuwii u dambeeyey waxay u muuqdeen kuwa ku saleysan arimo diimeed.
3b13a635 3f6d 43fc B810 C2e4a56f32f1
34d0479e 25c1 43d8 87d2 Ea012f2bdb52
B2d2b01d 0702 4eab B836 4586c6eba7f2